Khayre oo dhgax dhigay xarumo laga dhisayo Magaalada Kismaayo ... | Universal Somali TV
Khayre oo dhgax dhigay xarumo laga dhisayo Magaalada Kismaayo (SAWIRRO)
July 14 2017 04:34:46
Ra'iisul Wasaaraha Somaliya, Xasan Cali Khayre, ayaa gelinkii dambe ee Khamiistii dhagax dhigay laba dhismo oo lagu wado in laga hirgeliyo Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose.
Ra'iisal Wasaaraha Somaliya, ayaa waxaa dhagax dhigan ku wehlinayay masuuliyiin ay ka mid yihiin Wasiirka Maaliyadda, C/raxmaan Ducaale Bayle, Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) iyo xubno kale oo ka tirsan Golaha Wasiirada Xukuumadda iyo Jubbaland.
Bulshada reer Kismaayo, ayaa si weyn u soo dhaweysay booqashada ay magaaladan ku jooggan Ra'iisal Wasaare Xasan Cali Khayre iyo Golihiisa Wasiirada, oo Khamiistii shirkoodii ugu horeeyay ku yeeshay magaaladaasi.
Khayre, ayaa shirkan uga qabsoomay Kismaayo ku macneeyay mid lagu xoojinayo wada shaqaynta iyo midnimada shacbiga Somaliyeed.
Kan-horeDowladda Somaliya oo sheegtay inay la...
34,163,385 unique visits